Waa kee macalinka uu Lothar Matthäus kaga digay Bayern Munich inay la saxiixato?… (Wenger, Mourinho iyo Allegri) – Gool FM
(Germany) 05 Nof 2019. Halyeeyga reer Germany ee Lothar Matthäus ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta kooxda Bayern Munich inay ka fogaadaan saxiixa macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, isla markaana ay la saxiixdaan Massimiliano Allegri si uu ugu noqdo bedelka Niko Kovač.
Kooxda Bayern Munich ayaa shaqada ka ceyrisay macalinka reer Croatia ee Niko Kovač Axadii lasoo dhaafay, kaddib guuldaradii 5-1 aheyd ee ka soo gaartay Eintracht Frankfurt Sabtidii.
Warbaahinta Jarmalka ayaa waxay soo xusheen magacyada tababarayaal badan ee bedel u noqon kara Niko Kovač waxaana ka mid ah Arsene Wenger, Jose Mourinho iyo Massimiliano Allegri.
Haddaba Lothar Matthäus yaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Sky Sport” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan filayaa in Bayern Munich ay dooneyso inay la saxiixato macalin magac weyn leh, isla markaana ku guuleysan kara koobab badan, waana sababtaas ay magacyo badan miiska u saran yihiin”.
“Magacyada miiska saaran ayaa kala ah Mourinho, Allegri, Ten Hag, Ralf Rangnick iyo Arsene Wenger, laakiin hadii aan runta ka hadlo, waxaan qiyaasayaa in dhamaantood ay ku haboon yihiin Bayern, sababtoo ah waa macalimiin aad u fiican, qof walba oo ka mid ah wuxuu ku guuleysan karaa wax muhiim ah”.
Laakiin Lothar Matthäus ayaa wuuu dhinaca kale si cad u sheegay in xulashadiisa uu ka saari lahaa Jose Mourinho wuxuuna yiri:
“Waan ka saari lahaa, waan la dhacsanahay isaga iyo wax walba uu ku soo guuleystay xilliyadii hore, laakiin waxaan qabaa in shaqsiyadiisa iyo qaabka uu u shaqeeyo aysan ku habooneyn Bayern Munich, gaar ahaan warbaahinta”.